Review Ater an'ny mpivarotra Sun EA - Best Forex EA's | Mpanolotsaina manam-pahaizana | Robots FX
Jolay 15, 2020
HomeSun EA mpivarotraFamerenana Sun EA Review
BEST Forex EA'S | Expert mpanolo-tsaina | FX ANY JAPON Sun mpivarotra 1
Price: $ 269 (LOHAHEVITRA FIVAROTANA 1, FAMPIARAHANA MAIMAIMPOANA & 24 / 7 RAFITRA TOKONY)
Vola tsiroaroa: EURUSD, USDJPY
Fanamarihana: Misy fonosana 3 samihafa amin'ny FXTraderKit Expert Mpanolotsaina azo ampiasaina amin'izao fotoana izao:
- Sun EA mpivarotra: 1 Fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainana, Boky ho an'ny mpampiasa, fanavaozana maimaim-poana & 24 / 7 Fitiavana namana, vidiny tsy tapaka: $ 269
- Moon mpivarotra EA: 1 Fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainana, Boky ho an'ny mpampiasa, fanavaozana maimaim-poana & 24 / 7 Fitiavana namana, vidiny tsy tapaka: $ 269
- Tolotra manokana: 1 Fahazoan-dàlana amin'ny Sun Tranon'ny mpivarotra & # 39; mpivarotra, fanavaozana & fanohanana maimaimpoana, Vidiny fihenam-bidy: $ 405
Makà fampahalalana bebe kokoa momba ity Robot Forex mifameno ity ary vakio ny Ny famaritana ny mpivarotra Moon EA
Review Ater an'ny mpivarotra Sun EA - Mpanolotsaina ho an'ny Forex mahasoa ho an'ny Metatrader 4
Sun mpivarotra dia tena mahery sy tanteraka tanteraka FX Expert Mpanolotsaina ho an'ny mpandidy sy ny tantsaha. Ireo mpandrindra an'ity Forex Robot Niasa mafy nandritra ny taona maro izy ireo, mba hahafahany mamorona algorithm trading.
Sun mpivarotra dia mirakitra tambajotra vaovao sy fianarana lalina, mihazakazaka eo amin'ny sehatra varotra Metatrader 4 (MT4) fametrahana, fitantanana ary famaranana ny varotra. Ireo mpandraharaha dia nampiasa sehatra maromaro sy fampiroboroboana marobe mba hananganana ny Sun mpivarotra ary koa ny fitsapana ny rindrambaiko talohan'ny fanombohana ny tsena, ho an'ny vokatra faran'izay betsaka.
Ny FX Robot dia manana tombam-bidy tena avo be EURUSD ary USDJPY tsiroaroa amin'ny fotoana iray.
Zavatra tsy manam-paharoa Sun mpivarotra dia nitombo ny ekipa manam-pahaizana momba ny mpivarotra izay te-hahita anao hahomby!
Ampiasao ny Sun mpivarotra sy hiverina ny fampiasam-bola ho volamena!
Easy-bola tsy misy ezaka no Sun mpivarotra dia rehetra momba ny. Izany dia automated Forex tetika sy baikoina poto-rafitra izay mamela anao hipetraka indray, miala voly sy mijery fotsiny ny FX Trading Robot hanao ny fika. Taorian'ny masontsivana, mizana sy ny faritry ny ny varotra no omen'ny anareo, ny Robot ary maka ny anatanterahany ny varotra rehetra ho anareo. Izany mamela anao hanao fanaraha-maso ny hery rehefa mifantoka amin'ny raharaha lehibe hafa koa.
Tsy tahaka antsika olombelona, ​​ny Sun mpivarotra tsy misy fahatahorana ara-pihetseham-po ary hiasa amin'ny tontolo kajy tanteraka. Ny mpanolotsaina manam-pahaizana dia tsy handray fanapahan-kevitra haingana.
Sun EA mpivarotra - Momba ny lozika, varotra sy fangatahana hafa
Sun Forex Robot mpivarotra dia algorithm ara-barotra automatique feno ho an'ny sehatra Metatrader 4 (MT4). Ny paikadin'ity Mpanolotsaina manam-pahaizana ity, izay noforonina tao amin'ny algorithm, dia mifototra amin'ny famaritana ny haavon'ny fanohanana sy ny fanoherana, ary koa ny hamaritana ny fihetsika sy ny fitarihan'ny fihetsiky ny tsena, ahafahana manombatombana ny tanjaky ny tsindry hetsika ary ny mety hisian'ny fitohizan'izany. .
Ny FX Robot dia miasa EURUSD ary USDJPY tsiroaroa. Ny varotra miainga amin'ny ambaratonga dia voarindra mazava tsara ary tohanan'ny anton-javatra fototra. Ny fifanakalozana ara-bola mahomby / fatiantoka dia ny teboka 38-33, ary ny faharetan'ny fifanakalozana dia 200 minitra. Ary koa, ny EA dia manana mahay Mitantana vola.
Manoro hevitra mafy izahay ny hivarotra amin'ny Safe mode fampiasana 50% risika (na latsaka). Mila vola 200 ho an'ny 0.01 io.
Raha ny varotra amin'ny Mode average Ny risika atolotra dia 35% (na latsaka). Mitaky $ 100 ho an'ny 0.01 be dia be.
Mivarotra miaraka amin'ny Fomba mahery vaika tokony hametraka ny risika 25% ianao (na latsaka). Mila $ 50 ho an'ny 0.01 fotsiny dia tsy mila.
Ny tarehimarika hafa tokony hotehirizanao ho default.
Sun mpivarotra EA - Ny hany varotra rindrambaiko Forex mila tratranao
Mpanolotsaina manam-pahaizana momba ny masoandro dia mifanentana amin'ny mpiasan'ny Metatrader 4 (MT4), ary koa amin'ireo mpivarotra mampiasa ny ECN-type order.
Manoro hevitra mafy izahay hampiasa kaonty demo talohan'ny fifanakalozana amin'ny vola tena izy. Hanampy anao hahalala bebe kokoa ny fomba fiasan'ny mpivarotra izany alohan'ny hanaovana volanao tena izy amin'ny kaonty vola tena izy.
Politika refunda: Ny mpividy dia manome antoka tanteraka ny vola mandritra ny andro 30. raha Sun Forex Robot mpivarotra tsy nahazo tombony mandra-pahatapitry ny andro 30 dia hampody ny volanao ilay mpivarotra. Raha toa ka mihoatra ny 35% ny fihenan'ny kaontinao, dia hanomboka ny famerenam-bola raha toa ka mampiasa toe-javatra ilaina ianao.
Sun mpivarotra dia azo jerena ao amin'ny mampino hatrany vidiny, izany hoe $ 269 ihany. Aza miandry mba haka ny dika mitovy!
Tsidiho ny tranokala ofisialin'ny mpivarotra Sun EA
Fomba mahery vaika
Mpanolotsaina manam-pahaizana FXTraderKit
Tolotra FXTraderKit manokana
Mpanolotsaina manam-pahaizana momba ny masoandro
Sun Forex Robot mpivarotra
Famerenan'ny masoandro ny mpivarotra
Top Expert Advisors Oktobra 2019
TRANO 'TRANO TRANO TRANO - MAMPIASA ANTOKO FAMPISEHOANA AN-TOKONY ho an'ny METATRADER 4 (MT4) FIVORIANA FAHASAROTANA: + 2.8% FIVORIANA VOLANA (TSY MISY TOKONY MBOLA TONGA!) FIVORIANA MANKALAZANA, MPANARAKA! Famerenana Sun EA's mpivarotra - Mpanolotsaina manam-pahaizana momba ny Forex ho an'ny Metatrader 4 Navoaka Mahazoa fampahalalana sy bonus maro kokoa: https://www.bestforexeas.com/traders-sun-ea-review/ Ny mpivarotra Sun EA dia mahery sy feno automatique FX Expert. Mpanolotsaina ho an'ny vao manomboka sy ny pros. Efa niasa nandritra ny taona maro ny mpanakatr'ity Forex Robot ity, mba hahafahany mamorona ity algorithm algorithm ity. Ity Expert Advisor ist ity dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra ara-barotra forex vita amin'ny tsena ary natao hanaterana fiverenana avo.... Hamaky bebe kokoa "